‘शेरबहादुरजी ! ओलीलाई संविधान बुझाएको आरोप नलागोस्’ -
‘शेरबहादुरजी ! ओलीलाई संविधान बुझाएको आरोप नलागोस्’
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०७, २०७७ समय: १८:२३:१३
तपाईंकै शब्दमा भन्दा सबैतिरबाट लखेटिएको केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि पार्टी सभापतिले चाहिँ आडभरोसा दिएको हो ?
कांग्रेसका सभापति अरू थुप्रै कुरामा असफल हुनुहुन्छ, तर अढाई दशकयता सत्तामा पुग्ने र आफूलाई फाइदा हुने रणनीतिमा सफल हुनुहुन्छ ।
पुष्पकमल दाहालबाट धोका पाइरहेका बेला उहाँले केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाउनुभएको छ । शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा भएको गत निर्वाचनमा कांग्रेसको २७ सिट आएको थियो । उहाँले दुईवटा कम्युनिस्ट दुईतिर बसेर चुनाव लड्छन् भनेर माओवादीलाई साथमा लिएर सरकार बनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व आफूले गर्दागर्दै पनि प्रचण्डजी केपी ओलीसँग गएर मिल्नुभयो ।
ओलीले प्रचण्डजीलाई मिलाएको सत्तामा जान हो । शेरबहादुरजीले पनि आफ्नो राजनीति जोगाउने र फेरि सत्तामा जाने आशा प्रचण्डजीलाई सत्तामा राखेरै गर्नुभएको थियो । त्यो उहाँको रणीनीति काम लागेन, सबै चतुर्‍याइँ फेल भयो ।
मलाई लाग्छ, अहिले ओलीजीले संसद विघटनअघि काँही न काँही प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा शेरबहादुरको स्वीकृति लिनुभयो कि ! ओलीजीले ‘म संसद विघटन गर्छु, तपाईं चुनाव भन्नुस्, तपाईंलाई नै फाइदा हुन्छ’ भन्नुभयो कि !
त्यस्तो किन पनि लाग्छ भने शेरबहादुरजी चुनावी मुडमा हुनुहुन्छ । पार्टीको दबाबमा यो असंवैधानिक हो भन्नुभएको छ तर अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भनेर बोल्नुभएको छैन । संसद पुनस्र्थापनाको नारा लाग्न दिनुभएको छैन । ओलीजीमाथि केही प्रहार गर्नुभएको छैन ।
कांग्रेसले भन्छ, संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बनेको हो । आफैंले बनाएको संविधानको धज्जी उँड्दा चुनावमा हुने लाभ/हानी हेर्दै बस्न मिल्छ ?
‘शेरबहादुर देउवाजी एन्ड कम्पनी’का मानिसहरू कांग्रेसको मूल्य, सिद्धान्त विपरीत आफ्नो लाभ/हानी हेरेर बोलिरहेका छन् । लाभ/हानी भनेको व्यक्तिगत कुरा हो । शेरबहादुरजीलाई लाभ होला, प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । उहाँलाई त पञ्चायतले पनि प्रधानमन्त्री बनाउँ’थ्यो होला नि तर उहाँ त्योबेला आदर्श र सिद्धान्तका लागि जेल जानुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सात दशकको संघर्षबाट आएको संविधानको चीरहरण गरिरहेको बेला कांग्रेस व्यक्तिगत लाभ/हानी हेरेर बस्नुहुँदैन । संविधान जोगाउन शेरबहादुरलाई रोक्ने केही, कोही पनि देखिँदैन । अहिले कांग्रेसको एउटै नारा हुनुपर्छ– पहिले संविधानको रक्षा, त्यसपछि चुनाव । संविधान जोगिए चुनाव भइरहन्छ ।
अहिले कम्युनिस्टहरू फुटेकाले शेरबहादुरजीलाई गाह्रो भएको होला । यस्तो बेला चुनाव भइहाल्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न सकिने भयो । प्रधानमन्त्री भएर पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्न पाइयो भने फेरि सभापति पनि जित्ने सम्भावना रह्यो ।
सभापति देउवा अहिले ‘क्याल्कुलेटिभ’ भएका हुन् त ?
चारदशक लामो चिनजानको आधारमा भन्नुपर्दा शेरबहादुरजी त्यस्तो ‘क्याल्कुलेटिभ मुभ’ गर्न सक्ने मान्छे होइनन् । आफ्नो नाफाचाहिँ हेर्नुहुन्छ । लोकतन्त्र, संविधान, कांग्रेसको हित हिसाबकिताब गरेरभन्दा मेरो चाहिँ नाफा छ है भनेर हिड्ने मान्छे चाहिँ हो, उहाँ । नेकपा विभाजित छ, प्रधानमन्त्री र सभापति बन्ने, सांसद संख्या बढाउने अवसर छ भन्ने हेर्नुभएको होला ।
यहाँले नै भन्नुभयो, प्रचण्डलाई साथमा लिएर २०७४ को चुनाव जित्ने देउवाको दाउ फेल भयो । यो पटकचाहिँ दाउ लाग्ला त ?
फेरि पनि बिग्रिनेवाला छ । अहिले नेपालको राजनीतिक ब्लकहरूमा कांग्रेस, मधेशवादी पार्टी, माधव–प्रचण्ड नेकपा, दक्षिणपन्थी राप्रपा र राष्ट्रपतिसहित ओली क्लब छ । यीमध्ये देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबैभन्दा खराब ओली समूह नै हो ।
शेरबहादुरजी यस्तो अलोकप्रिय ब्लकसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुभयो भने काँग्रेसले जित्दैन । ओली ब्लकले संविधान मिचेको छ, कोरोना महामारीका बेला जनताको जीवनलाई भन्दा बढी आफ्नो सत्तालाई महत्व दिएको छ । आफ्नै पार्टी फोरेको छ, बाहिरी सम्बन्ध पनि बिगारेको छ ।
गत चुनावभन्दा केही पहिला मैले गड्डाचौकीदेखि काँकडभिट्टासम्म थुप्रै कार्यक्रम गर्दा पाएको रिपोर्ट शेरबहादुरजीलाई ब्रिफिङ गरेको थिएँ, कांग्रेस हार्दैछ भनेर । अहिले उहाँलाई सुझाव दिन पाएको छैन । तपाईंहरूमार्फत भन्न चाहन्छु– प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान कुल्चिँदा तपाईंले समर्थन गर्नुभयो भने भोलि नेपाली सेना वा अरू कसैले कुल्चिए भने कुन नैतिक शक्तिले फाइट गर्नुहुन्छ ?
शेरबहादुरजीमाथि यसै पनि आरोप छ– उहाँले हिजो प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउनुभयो । आज फेरि पनि अर्को आरोप लाग्दैछ– उहाँले संविधान र लोकतन्त्र ओलीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ ।
दुर्भाग्य ! उहाँ आज सिंगो कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, देउवाजी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति । मैले गल्ती गरेँ भन्दै गिरिजाप्रसादसँग मिल्न आउँदा कांग्रेसीहरूले उहाँलाई क्षमा दिए । आज त कांग्रेसलाई सच्चिन सक्ने ठाउँ पनि छैन ।
आज फेरि उहाँले देखाएको दोधारे नीतिले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधानलाई चेपुवामा पार्दैछ । उहाँले आफैँलाई उद्धार गर्न कोही आउन नसक्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँलाई हिजोको जस्तो गल्ती गर्ने छुट छैन ।
संसद पुन:स्थापना भयो भने कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्लान्, ओलीको ठाउँमा अर्को कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री होलान् । कांग्रेसले के पाउँछ त ?
के भयो त ! कांग्रेसका लागि दुई वर्षपछि हुने चुनाव खराब हुन सक्ला तर सात दशक लगाएर बनाएको संविधान त बाँच्छ नि ।
संविधान जोगियो भने दुईवर्षपछि हुने चुनावमा कम्युनिस्टहरूको यो असफलताको ब्लुप्रिन्ट लिएर जनतामा जाने हो भने काँग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ । त्यसैले शेरबहादुरजीले भन्नुपर्छ– मलाई अहिले कम्युनिस्ट फुटेको पनि हेर्नु छैन, चुनावमा जान पनि हतार छैन । हामीले बनाएको संविधान हरहालतमा जोगाउनुपर्छ ।
कम्युनिस्ट सरकारले चुनावको लागि अझ ‘पपुलिस्ट’ नारा ल्याउला भन्ने डर हो कि ?
कम्युनिस्टले जनताको लागि राम्रो भइरहेको छ भने कांग्रेसले त्योभन्दा राम्रो कामको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जस्तो– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले सुरु गर्नुभन्दा पहिले त्रिविमा वार्षिक क्यालेन्डर थिएन । केयुले सबै काम क्यालेन्डर बनाएर गर्न थालेपछि त्रिविले पनि सुरु गर्‍यो ।
मनमोहन अधिकारीले एकसय रुपैयाँ वृद्ध भत्ता दिनुभयो । डा. रामशरण महत यसरी पैसा बाँड्न हुँदैन भन्नुहुन्यो । पछि उहाँले नै त्योभत्ता बढाउनुपर्‍यो । आज थुप्रै वृद्धवृद्धालाई त्यो पैसाले बाँच्न सजिलो भएको छ ।
कम्युनिस्टले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रम ल्याए । आज गाउँमा बजेट नै गइरहेको छ । कांग्रेसले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको थियो, आज राष्ट्रिय उत्पादनको ५ प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राम्रो काम त कम्युनिस्टले गरोस् कि कांग्रेसले गरोस्, राम्रै हो नि ।
संवैधानिक कुरा अलग हो, संसद पुन:स्थापना भएन भने कांग्रेसलाई फाइदा हुने देखिन्छ नि ।
फाइदा त चुनाव भए न होला, नभए के हुन्छ ? कल्पना गरौं– सर्वोच्च अदालतले यसैगरी बहस गराइहने र वैशाख बितेर जाने, प्रधानमन्त्रीले बहस चलिरहेको भन्दै मंसिरमा चुनाव सार्ने भयो भने ?
चुनाव नगरेर उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन सक्छन् त ?
समस्या त्यही हो, कुर्सीमा बसिरहन अनेक प्रपञ्च हुन्छ । संविधान जान्छ, नेपालमा निरंकुशतन्त्र चल्छ । अहिलेको आन्दोलनको एजेण्डा नै यही हो ।
सन् २००० पछि संसारका २२ देशमा चुनावबाट आएका नेता तानाशाह भए । उनीहरूले चुनाव नगराउने, गराए राज्यशक्ति कब्जा गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गन्तव्य त्यही हो । ‘राइटिस्ट कोर्स’मा हुनुहुन्छ ओलीजी । ‘एक्ट्रिम लेफ्ट’बाट आएका उहाँ ‘मोडरेट’, ‘सेन्टर’ हुँदै अहिले ‘राइटिस्ट कोर्स’मा पुग्नुभएको छ ।
उहाँ उग्रराष्ट्रवादी हो । उहाँ रामको जन्मभूमि नेपाल हो भन्नुहुन्छ । जब संस्कृति र सीमाबारे उग्र बोलिन्छ, त्यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाइन्छ, तब ‘राइटिस्ट’ भइन्छ । कम्युनिस्टहरू भनेको त अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्छन् ।
कांग्रेस आन्दोलनमा जानु भनेको प्रचण्ड वा माधवकुमार नेपालमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हो, हामी किन जाने ? भन्ने पनि छ नि काँग्रेसभित्र ।
कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने भनेको आफू सत्तामा जान वा अरू कसैलाई त्यहाँ पुर्‍याउन होइन, संविधान रक्षाका लागि हो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर संविधान भत्काउन थालेका छन् । यो ‘टेस्ट’ मात्र हो । सार्वभौम संसद भंग गर्दा ठूलो ‘रियाक्सन’ भएन भने ओलीको ‘फलोअप एक्सन’ आउन थाल्छ ।
कांग्रेस भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन । सभापतिले जे चाह्यो त्यही हुन्छ ?
संक्षिप्तमा के भन्छु भने, ‘डेमोक्रेटिक पार्टी लिडर’ सर्वेसर्वा जस्तै हुन्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी सर्वेसर्वा जस्तै छन् । उनी पार्टीको सभापति होइनन्, तर मोदी र अमित शाहको जोडी बिजेपीका लागि सर्वेसर्वा छन् ।
अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीको प्रमुख को हो, हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छैन । डोनाल्ड ट्रम्प नेता हो भन्नेचाहिँ थाहा छ । सामान्यतः ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’को ड्राइभिङ सिटमा जो बस्छ, उही सर्वेसर्वा हुन्छ । उसलाई देखाएर चुनाव लडिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसमा हिजो बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद वा गिरिजाप्रसाद हुँदा पनि त्यही थियो । सर्वेसर्वा हुन नसकेको त अहिले शेरबहादुरजी हो । उहाँलाई रामचन्द्र पौडेलले चुनौती दिइरहनु भएको छ । शेरबहादुरजीसँग सिद्धान्त, नीति, नेतृत्व हाँक्ने क्षमता नै भएन ।
भनेपछि, यति संगीन घडीमा पनि गल्ती गर्दैछन्, होइन ?
उहाँ ‘ब्लण्डर’ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर गएको ४८ घण्टामा केही फरक महसुस भएको छ । पार्टी भित्र/बाहिर सबैतिरबाट उहाँमाथि दबाब परेको होला । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउँदैनन् कि क्या हो भन्ने उहाँको भाषण आयो । त्यसरी शंका लाग्यो भने उहाँको दिमाग खुल्यो नि !
अर्को, शेरबहादुरजीले अहिले नेकपा फुटेको छैन भन्नुभएको छ । हुन पनि तिमीलाई यसमा राखिन, प्रवक्ताबाट हट्यौं, महासचिवबाट हट्यौं मात्र भनेका छन् । ओली स्वयंले ‘आउने भए कुर्सी सुरक्षित छ’ भन्नुभएको छ ।
प्रचण्डजीहरूले पनि अहिले ओली समूहमा लागेकाहरूलाई हटाएको मैले सुनेको छैन । ‘पावर गेम’ चलेका प्रदेश सरकारहरू हिजोको रिसइबी फेरिँदैछ । यस्तो त पार्टी फुट्नुभन्दा पहिले पनि थियो ।
यसमा शेरबहादुरजीले के बुझिरहनुभएको छ भने अहिले यिनीहरू फुटे भनेर अगाडि बढौंला वा संयुक्त संघर्षमा जाउँला, संसद पुन:स्थापना भयो भने भोलि यिनीहरू मिलिहाल्छन् ।
त्यसैले, अहिले कांग्रेस नेकपाको झगडामा नपरी संविधान रक्षाको लागि एकलब्य कदम चाल्नुपर्छ । संविधानमा नभएको कदम प्रधानमन्त्रीले चालेका छन् । राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर त्यसलाई सदर गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवालय जस्तो भएको छ ।
प्रदेशहरूमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसक्यो, संविधानको रक्षा गर्छु भनेर मात्र होला र ?
अहिले प्रदेशहरूमा चलिरहेको राजनीतिमा कांग्रेसले केही न केही ‘पोजिसन’ लिनैपर्छ । कि सरकार टिकाउनुपर्‍यो, कि सरकार हटाउनुपर्‍यो र आफू पनि जानुपर्‍यो । मेरो विचारमा, शेरबहादुरजी र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश तहको नेतृत्वलाई दिए हुन्छ ।
प्रदेश सरकारहरू संविधान रक्षा वा अतिक्रमणमा फसेका छैनन् । त्यहाँ जे भइरहको छ, त्यो संवैधानिक दायराभित्रै भइरहेको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावहरू आएका छन् भने ती संविधानबाहिर आएका होइनन् ।
तलका साथीहरू प्रचण्ड–माधव समूहतिर लाग्दामाथि अर्को पक्ष रिसाउला वा ओलीतिर लाग्दा अर्को समूह टाढिएला भन्ने होला नि ।
संघीय संरचना भएका देशहरूमा के–के भइरहेको छ भनेर नियाल्दा यसको उत्तर भेटिन्छ । भारतमै हेर्नुस्, महाराष्ट्रमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र शिवसेनाको सरकार बन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन । त्यहाँ शिवसेना र बिजेपी मिलेर चुनाव लडेका थिए । कांग्रेस धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्छ भने शिवसेना हिन्दु राष्ट्रवादमा । तर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले महाराष्ट्रमा जे गर्दा कांग्रेसको हित हुँदा त्यही गर, हामी समर्थन गर्छौंं भनिदिएपछि कसैले नसोचेको भयो । अन्यत्र पनि यस्तो भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले त्यसो गर्न सक्छ त ?
नेपाली कांग्रेसलाई मेरो सल्लाह– योभन्दा राम्रो अरू बाटो छैन । कांग्रेसले प्रदेश १ मा जेगर्दा राजनीतिक रूपले पार्टी र जनतालाई फाइदा हुन्छ त्यही निर्णय लेऊ, हामी समर्थन गर्छौं भन्नुपर्छ । यो ‘पावर डिभोलुसन’को अवसर पनि हो । अनलाइनखबरबाट